विवाह नभई १५ वर्षकै उमेरमा सुन्तलीले जन्माइन् छोरी, झुपडीमा कष्टसंग हुर्काउँदै सन्तान (भिडियो हेर्नुस्) – Nepali Taja Khabar
मानसिक रुपमा स्वस्थ्य नभएकी १५ वर्षकी सुन्तलीले छोरी जन्माएकी छन् । उनको घरमा खानेकुरा केही छैन । छोरीलाई स्याहार सुुसार गर्न समेत सक्दिनन् । घरमा राम्रा लुगा र खुवाउने कुरा नभएपछि उनले छोरीलाई माछाको जालीले छोपेर राखेकी छन् ।
जाली माथि झिंगा भन्किएका छन् । आफुले लगाएको लुगा पनि राम्रोसंग सम्हाल्न सक्दिनन् । छोरीको स्याहार झन कसरी गर्लिन् । यो भिडियो सार्वजनिक गर्दै युट्युवरहरुले उनका लागि सहयोग जुटाउन आग्रह गरेका छन् ।
सानो झुपडीमा बच्चालाई सामान्य खानेकुरा समेत नभएको अवस्थामा उनको स्वास्थ्य र अन्य पौष्टिकताको कुरा त गर्ने अवस्था नै छैन । जन्मिएको ७ दिन देखि उनले माछाको जालले छोपेर राख्ने गरेकी थिइन् । उनले जन्माएको बच्चाको बुवा को हो भन्ने खुलेको छैन ।
उनले बताए अनुसार सोही गाउँका एक वृद्धको हो भन्ने कुरा खुलाएकी थिइन् । प्रहरीले त्यस वारेमा अनुसन्धान गर्न वृद्धलाई पक्राउ समेत गरेको थियो । त्यस पछिको कानुनी प्रकृया के भयो भन्ने पनि यि बालिकालाई थाहा छेन ।
उनको परिवारमा अन्य ३ जना बालबालिका छन् । सुन्तलीले जन्माएको छोरी अहिले ठूली भइसकेकी छन् । तर उनीहरुको आर्थिक अवस्था भने उस्तै छ । एक वर्ष अघि उनले बच्चा जन्माउँदा बाबु को हो भन्ने विषयमा निकै हल्ला भएको थियो । त्यस पछि अनुसन्धानका क्रममा गाउँकै ७० वर्षका वृद्धले अनैतिक काम गरेको भन्ने खुलेको थियो ।
११ वर्षदेखि बेपत्ता बाबुको खोजीमा लाग्दा पनि पत्ता नलागेपछि आमाका आखाँबाट बलिन्द्र आँशु(हेर्नुहोस यो मार्मिक भिडियो)
*ग्वा *ग्वा रु*दैं श्री*मा*न आए मिडियामा, यस्तो श्री*मती त श*त्रु*लाई पनि न*परो*स भन्छन् श्रीमान (भिडियोसहित हेर्नुहोस)
राजेन्द्र खड्गीको खुला च्यालेन्ज : फेरि नेपाल आएर देखा ? तेरो त म ! सगरमाथामाथि दाबी गर्ने त को हो ?